App Store ရှိအကောင်းဆုံးကစားနည်းများ၊ သင်ကစားဖူးပါသလား။ | အိုင်ဖုန်းသတင်း
App Store ရှိအကောင်းဆုံးဂိမ်းများ
ပါပလော Aparicio | | အိုင်ဖုန်းဂိမ်းများ
App Store ရှိအကောင်းဆုံးကစားနည်းများကားအဘယ်နည်း။ App Store တွင်ကစားစရာကောင်းသည့်ဂိမ်းများစွာရှိသည်။ ရွေးချယ်စရာများစွာရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော (ကောင်းချီးမင်္ဂလာ) ပြproblemနာသည်မည်သည့်အရာများကကျွန်ုပ်တို့ကိုကြီးမားသောရှုပ်ထွေးမှုများမရှိဘဲကောင်းသောအချိန်ကိုဖန်တီးစေမည့်အရာများအနက်ကိုသိခြင်းဖြစ်သည်။ ခေါင်းစဉ်ကောင်းများအများအပြားတွင်ရှုပ်ထွေးသောထိန်းချုပ်မှုများရှိသည်၊ သို့သော်အရည်အသွေးမဆုံးရှုံးဘဲကျွန်ုပ်တို့ကိုမိနစ် ၁ မှဂိမ်းကစားရန်ခွင့်ပြုသည့်ပိုမိုရိုးရှင်းသောထိန်းချုပ်မှုများရှိသည်။
ရေတွက်ပြီးသော်လည်းအရည်အသွေးသို့မဟုတ်အရေးပါမှုအဆင့်အတန်းကိုမထားသည့်ဤစာရင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်ကိုသင်ပြပါလိမ့်မည်။ App Store ရှိအကောင်းဆုံးဂိမ်း ၂၅ ခု ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တာကဖြစ်နိုင်ချေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ဂိမ်းတွေပေါ့။ ဒါကြောင့်မင်းကိုစိတ် ၀ င်စားဖို့တစ်ခုထက်ပိုပါတယ်။
App Store ရှိအကောင်းဆုံးဂိမ်း ၂၅ ခု
Infinity ဓါး 2ဖြေ: Infinity Blade Saga ဟာတိုက်ခိုက်ရေးမှာနာမည်အကြီးဆုံးပဲ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်ရောက်ရှိလာခဲ့သောမူရင်းဂိမ်းကတည်းကသုံးစွဲသူများသည်၎င်း၏ဂိမ်းသုံးမျိုးကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ယူခဲ့သည်။ Infinity Blade 2010 ကို Apple ၏အဓိကကျသောနေရာ၌ပင်သတ္တုဖြင့်ပြသခဲ့သည်။ သုံးယောက်ထဲကအကောင်းဆုံးကတော့3ဖြစ်တယ်။
Grand Theft Auto 3: သင်မသိသော GTA Saga အကြောင်းအနည်းငယ်သာပြောနိုင်ပါသည်။ ဒီစီးရီးဂိမ်းဟာနာမည်ကျော်ကြားမှုနဲ့အရေးပါမှုကိုပြသနိုင်တဲ့ပြက်လုံးများ၊ မှတ်စုများနှင့်ပြက်လုံးအမျိုးမျိုးတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ GTA3သည် Saga ၏အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာကြီးသည်သင်တို့နှင့်အတူအဆုံးသတ်: တစ်ကိုယ်တော် Remixဖြေ - ဒီနာမည်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာမူလ Nintendo DS အတွက်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ RPG ရှိတယ်။ Arcade စက်အဟောင်းများကိုကစားခဲ့ကြသူများအနက် The World Ends With You သည်ရန်သူအမြောက်အမြားအကြားတွင်တိုးပွားများပြားလာသောတိုက်ခိုက်ရေးဂိမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အားသတိပေးသည်။ အထက်ဖော်ပြပါအချက်များအပြင် RPG ၏ဝိသေသလက္ခဏာများလည်းပါ ၀ င်သည်။ လုံးဝအကြံပြုလိုတယ်။
သေခြင်းတရားလမ်းလျှောက်: အဆိုပါဂိမ်းဖြေ - ကျွန်တော် Walking Dead စီးရီးရဲ့အောင်မြင်မှုအကြောင်းပြောရင်၊ အသစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှာမတွေ့ပါဘူး။ ရုပ်ပြအမည်တူအမည်ရှိရုပ်ပြဇာတ်လမ်းသည် Apocalyptic Zombie ကမ္ဘာတွင်နေထိုင်ရန်ကြိုးစားသူများ၏အတွေ့အကြုံများကိုပြသသည်။ ဒီဂိမ်းမှာကျွန်တော်ဟာအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ Lee Everett ဖြစ်ပြီးမတူကွဲပြားတဲ့ဇာတ်လမ်းခြောက်ခုမှာအသက်ရှင်သန်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ မင်းအဲဒါကိုလက်လွတ်မသွားဘူးလား။
ခံတပ်- RPGs ကိုနှစ်သက်ရင် Bastion ကစားတာကိုမရပ်နိုင်ဘူး။ အချည်းနှီးမဟုတ်သည်မှာ၎င်းကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် App Store ရှိအကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် touch screen များအတွက် RPG ကဲ့သို့ဖြစ်သင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောလိမ့်မည်။ နည်းနည်းထပ်ပြောလို့ရတယ်
လေလံဆွဲရန်: ငှက်များကို pissed ဟုမည်သူမဆိုမသိပါလား။ မင်းဘာတွေရောက်နေတာလဲ? ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Rovio မှဖန်တီးခဲ့သောဤငှက်အုပ်စုသည်ဥများကိုခိုးယူသောဝက်စိမ်းများကိုတိုက်ခိုက်သောကြောင့်အလွန်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စျေးကွက်အမှတ်တံဆိပ်ကိုဖန်တီးရန် iPhone, iPod နှင့် iPad ဖန်သားပြင်မှထွက်ခွာသွားသည်။ သူဟာဂရပ်ဖစ်မှာအကောင်းဆုံးမဟုတ်ပေမယ့်ပထမဆုံး Angry Birds ကသူကိုစတင်ဖန်တီးခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့်သူကဒီစာရင်းထဲမှာပါဝင်ဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်။
ဘိုအယူအဆ: ငါဘယ်မှာလဲ? ဘာဖြစ်တာလဲ? ဤလွတ်လပ်သောခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှောင်ကမ္ဘာတွင်ကလေးတေးသံမပါဘဲထိန်းချုပ်လိမ့်မည်။ သူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူးနိုင်သည့်အထူးဆန်းဆုံးအန္တရာယ်များကိုဖြတ်သန်းရလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြီးဆုံးသည်အထိကျွန်ုပ်တို့ကိုလိုက်ပြေးမည့်spရာမပင့်ကူကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သွားမလို့လဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Limbo တွင်ရှိသင့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်း / အစ်မသို့မဟုတ်မည်သည့်မိန်းကလေးမဆို…စတင်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် App Store ရှိအကောင်းဆုံးဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မအံ့သြပါ။
Rayman Jungle Run ကိုဖြေ - ဒီစာရင်းက endles တွေပြေးနေတယ်။ Rayman Jungle Run တွင်မည်သည့်အခြားဂိမ်းမဆိုကဲ့သို့ (ညာဘက်သို့) ပြေးရလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ထူးခြားသောအရာတစ်ခုဖြစ်သော Rayman ၏ကမ္ဘာတွင်ဖြစ်သည်။
အလွန်သေးငယ်သောအတောင်ပံများApp Store တွင်ဆင်တူသောဂိမ်းများစွာရှိသည်။ သို့သော် Tiny Wings သည်၎င်းတို့ထဲမှပထမဆုံးဖြစ်ပြီး App Store ရှိအကောင်းဆုံးဂိမ်းစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သင့်သည်။ ဒီဂိမ်းမှာငှက်တစ်ကောင်ရဲ့လေယာဉ်နဲ့ကျဆုံးခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မြန်မြန်ရွေ့လျားနိုင်သမျှဝေးဝေးပြေးနိုင်အောင်ထိန်းချုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအဆုံးမဲ့ပြေးနဲ့တူပေမယ့်တစ်ခြားကွဲပြားခြားနားသောမျိုး။
အသီး Ninjaဖြေ - နိဒါန်းမလိုအပ်တဲ့နောက်ဂိမ်းတစ်ခု။ သစ်သီးများကိုအများဆုံးသိုလှောင်ရန်သို့ငါတို့လက်ချောင်းများကိုလျှောချရမည်ဖြစ်သည်။ youtube တွင်ဗီဒီယိုများစွာရှိပြီး Fruit Ninja ကစားသည့်ကြောင်များ၊ ဂိမ်းများကဲ့သို့ရယ်စရာကောင်းသည့်ဗီဒီယိုများရှိသည်။
Jetpack Joyrideဖြေ - ညာဘက်ကိုပြေးပြီးတတ်နိုင်သမျှဝေးကွာသွားအောင်လုပ်ရမယ်။ Jetpack Joyride ဟာအဆုံးမဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးစက်ရုပ်တစ်မျိုးနဲ့စက်ရုံတစ်ရုံကိုဖြတ်သန်းပြီးသူကိုပျံသန်းစေတဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လိမ့်မယ်။ အထူးလှုပ်ရှားမှုများစွာရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုအာမခံပါသည်။
Scribblenauts Remixဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာ Nintendo 3DS အတွက်တီထွင်ခဲ့တဲ့ action-adventure ပဟေpိဂိမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ Starites စုဆောင်းရန်သူ၏လမ်းအပေါ် Maxwell ကိုထိန်းချုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
မက်စ် Payne မိုဘိုင်း- Max Payne ၏မိုဘိုင်းဗားရှင်းသည်၎င်းကို Store App ရှိအကောင်းဆုံးဂိမ်းစာရင်းတွင်မှန်ကန်စေသည်။ ၎င်းသည်သေနတ်သမားကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ပထမလူမဟုတ်သကဲ့သို့၊ နောက်ခံကောင်းတစ်ခုရှိသည်။
အပင် vs. Zombiesဒုတိယပိုင်းကိုရပြီးဖြစ်သော်လည်းမူရင်းဂိမ်းသည်အရည်အသွေးမကင်းပါ။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်နှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့် In-app ၀ ယ်ခြင်းများမပါ ၀ င်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ငွေပေးစရာမလိုဘဲကြီးစွာသောခေါင်းစဉ်ကိုခံစားနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်ဒုတိယအပိုင်း၏အပိုပစ္စည်းများမပါရှိသော်လည်း၎င်းကိုမလိုအပ်ပါ။
Chaos Rings II: အကယ်၍ သင်မူလ Final Fantasy ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးလက်ဖဝါးထဲရှိယနေ့ဂရပ်ဖစ်များနှင့်ဆင်တူသောအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေပါကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ Chaos Rings II ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စျေးပေါသောဂိမ်းမဟုတ်သော်လည်း၎င်းအတွက်ယူရိုတိုင်းကိုသေချာသည်။
GTA: တရုတ်တန်းစစ်ပွဲများ- ဤစာရင်းသည် GTA စီးရီး၏ဒုတိယခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ထိုက်သင့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်သာပြောနိုင်သည်မှာ“ ကစားပါ၊ ပြီးတော့သင်ရှာပါလိမ့်မည်”
NOVA 3: Near Orbyt Vanguard Alliance3၏အမည်အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် App Store တွင်အကောင်းဆုံးလူမြင်ကွင်းများထဲမှတစ်ခုရှိသည်။ သို့သော်အချို့သောစွမ်းအားများဖြင့်ဂိမ်းကို၎င်းကဲ့သို့သောတစ်ခုတည်းမျှသာမဟုတ်ပါ။ ငါထွက်ထွက်ကတည်းကငါရှိခဲ့ပါတယ်ကြောင့်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
အလွန်သေးငယ်သောမျှော်စင်ဖြေ - ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ Tiny Tower မှာစတင်ခဲ့တာကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အအုံကိုတည်ဆောက်ရမယ်။ တကယ်တော့ဒါဟာအသံထက်ပိုပြီးပျော်စရာကောင်းတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့သင်စမ်းကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစာရေးသားချိန်တွင်၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည် (ထူးဆန်းမည်၊ သို့သော်ပြောင်းလဲနိုင်သည်) ။
Timbermanဖြေ - Flappy Bird ကိုဒီစာရင်းမှာသူတီထွင်သူက App Store ကနေဖယ်ထုတ်လိုက်လို့မရဘူးဆိုရင် Timberman ဆိုတဲ့ဂိမ်းကိုသူ့ရဲ့မှန်ဘီလူးနဲ့ဂရပ်ဖစ်ထဲမှာပုံဖော်ထားတယ်၊ ဒါပေမယ့်စွဲလမ်းမှုများစွာဖန်တီးပေးတယ်၊ သူငယ်ချင်းများ
အံ့သြဖွယ်အနိုင်အထက်- touchscreens ပေါ်တွင်ကစားသောအခါ၊ ထိန်းချုပ်မှုများသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ အကယ်၍ လုပ်ဆောင်မှုသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါကဂိမ်းသည်၎င်းနှင့်မထိုက်တန်ပါ။ Amazing Breaker တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့မှောက်ရှိပုံရိပ်ကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်သာလျှင်ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ရှားပစ်ရမည်။ ငါအရမ်းကြိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီစာရင်းကိုငါထည့်လိုက်တယ်။
ဂျီသြမေတြီစစ်ပွဲများ 3ငါအတွက်အကောင်းဆုံး။ ၎င်းသည်တတိယလူသေနတ်သမားများနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာ၏ပုံရိပ်နှင့်အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောအသံများဖြင့်ရောနှောခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဤစာရင်းမှတစ်ယောက်ကိုအကြံပြုခဲ့ပါကကျွန်ုပ်သည်ဤဂိမ်းကိုအကြံပြုလိမ့်မည်။
Swordigoဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာရိုးရှင်းတဲ့ပလက်ဖောင်းဂိမ်းရှိတယ်။ ဒီဂိမ်းအမျိုးအစားကဘာလဲ? ကောင်းပြီ၊ ငါသူတို့ကိုချစ်ပြီးသူတို့က console အဟောင်းတွေရဲ့ကစားနည်းကိုပြန်ပြောပြတယ်။ Swordigo ကကျွန်တော့်ကိုအချိန်များစွာပေးခဲ့တယ်၊
ရီးရဲလ်ပြိုင်ပွဲ 2: ဒီစာရင်းကကားဂိမ်းကိုလက်လွတ်မပေးနိုင်ဘူး။ RR2 သည်ကွဲပြားခြားနားသောကားများနှင့်ပြိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးမျိုးနှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရမည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ RR3 ထက်ပိုကောင်းတယ်၊ ဝယ်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဂိမ်းလိုချင်ရင်ရပ်တန့်စရာမလိုဘဲဆပ်စရာမလိုဘဲကစားနိုင်အောင်လုပ်ပေးတယ်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် Asphalt ကဲ့သို့သောအခြား Saga များနှင့်မတူဘဲလက်တွေ့ကျသည်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်ကောင်းသည်ဟုဆိုသော်လည်းလက်တွေ့မကျတော့ပါ။
ကြိုးဖြတ်: စမ်းသပ်ချက်သကြားလုံးစားတဲ့ဒီအစိမ်းရောင် bug ကိုမင်းမသိဘူးလား။ ကောင်းပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်အတွက်အဆင့်တစ်ခုစီသကြားလုံးတစ်ခုပေးရန်၊ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျသောအချိန်တွင်ကြိုးများကိုဖြတ်တောက်ရန်နှင့်၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်အမျိုးမျိုးသောယန္တရားများကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ သတိထားပါ၊ ငါတို့မရရင်ငါတို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကဝမ်းနည်းနေတယ်။
PAC-MAN ကို 256: ၂၁ ရာစု၏ comecocos နှင့်နောက်ဆုံးသော်လည်းအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ PAC-MAN 256 သည်ဒဏ္myာရီဆန်သောဂိမ်းတစ်ခု၏ဗားရှင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းရှေ့ဆက်သွားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်၊ ဒါ့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့မှာတစ္ဆေအမျိုးမျိုးကိုသတ်ဖြတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိတယ်။ ကောင်းသောအရာကအခမဲ့ဖြစ်သည်။ အားနည်းချက်ကတော့ကစားပွဲ ၆ ခုအပြီးမှာကျွန်တော်တို့မစောင့်နိုင်ရင်ဂိမ်းကစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
မင်းဘာထင်လဲ App Store ရှိအကောင်းဆုံးဂိမ်းများ? App Store ရှိသင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းကဘာလဲ။ ဒီစာရင်းထဲမှာလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းအက်ပ်များ » အိုင်ဖုန်းဂိမ်းများ » App Store ရှိအကောင်းဆုံးဂိမ်းများ
32 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
နံပါတ် ၁၃ giochi က giochi & rompicapo လား။
နံပါတ် (၁၃) နာမည်ကိုရေးတဲ့အခါယေရှုမှားခဲ့တယ်။ ဒီလင့်ခ်ကရည်ညွှန်းတဲ့ဂိမ်းက Hook Champ ဖြစ်တယ်။ သတိပေးချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နှုတ်ဆက်ခြင်း!
IGN သည် US မှဖြစ်ပြီးဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင်ယူကေမဟုတ်ပါ။ 100% အကြံပြုခဲ့သည်
အလွန်ကောင်းသောဂိမ်းများ၊ ကျွန်ုပ် Asphalt5ကိုနှစ်သက်သည်
မေးခွန်းမေးခွန်း - ဖမ်းကဘာလဲ။ (ဆိုင်ကယ်နှင့်အတူ)
ထိုအခါ Doodle ခုန်? 🙁
@beto စာမျက်နှာကိုဖွင့်ပြီး UK say လို့ပြောလိုက်ပါ
ပုံထဲကမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကဘာလဲ? = (= (= (= (= (= (= (= (=))
နှင့်အချို့ TAP TAP ?? ဒါမှမဟုတ် sim မြို့ ?? 🙁 OSMOS ငါဘာတွေလုပ်နေလဲမသိဘူး .. hehe
joseph သို့ပြန်သွားရန် !!
ငါ့အတွက်ငါလက်လွတ်မခံနိုင်သူများထဲမှတစ်ခုမှာ Bejeweled2ဖြစ်သည်
ထို့အပြင်၎င်းသည်တစ်မိနစ် BLITZ ဖြင့်တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်သို့မဟုတ်စောင့်ဆိုင်းနေရသည့်နေရာတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ထိုအသီးကို Ninja ???????
ငါဒီစာရင်းကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူး၊ ဒီထက်ပိုပြီးပိုကောင်းတဲ့ဖျော်ဖြေမှုဂိမ်းတွေရှိတယ်။ အနည်းဆုံးသင်တန်း၏ငါ့အမြင်ကနေ X ။
ငါစာရင်းတစ်ခုဤကဲ့သို့သောသနားစရာစာရင်းကိုမြင်ကတည်းကဒါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာဖြစ်ခဲ့သည် ... သင်မည်သည့်ဂိမ်းကိုဝယ်ခြင်းငှါဆုံးဖြတ်ရန်စာရင်းတစ်ခုရှာနေလျှင်, ဒါကြောင့်မက xD
မင်္ဂလာပါ။ ဂိမ်းကောင်းများ၊ အကယ်၍ မင်းတို့ကဒေါသထွက်နေတဲ့ငှက်တွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ငါကုန်တင်ကားတွေ & ဦး ခေါင်းခွံတွေကိုအကြံပေးချင်တယ်
mister flo အားပြန်ကြားပါ
ပထမတစ်ခုက cd လောင်းကစားလုပ်တဲ့အရမ်းဆိုးတယ်
အကောင်းဆုံးဂိမ်းတွေထဲကတစ်ခုကတော့ငါ့ရေဘယ်မှာလဲ (စပိန်လိုငါ့ရေဘယ်မှာလဲ) ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်အကြံပြုပါသည်🙂
Jose santana ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့်အတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်စျေးပေါသောဂိမ်းသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု ၃ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၈၉ ဆင့်သာကျသင့်ပြီးမယှဉ်နိုင်သည့်ဂရပ်ဖစ်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်။
Jose Santana သို့ပြန်သွားပါ
ထို့အပြင် jetpack, သစ်သီး Ninja ကိုနှင့်သေပြီအစပျိုးပျောက်ဆုံးနေသည်
ဒီဟာကမကောင်းဘူး၊ App ထဲမှာအကောင်းဆုံးဂိမ်းက MINECRAFT ဖြစ်တယ်။ သင်သိခဲ့သလား !!!!!!!
ဟက်တာဟက်တာနှင့်လည်း2boos
supercell (မျိုးနွယ်စုတိုက်ပွဲများ၊ ကမ်းခြေပြိုခြင်း၊ မြက်ခင်းများ) မှသူများကိုသင်မမှတ်မိပါ။
ဒါဝိဒ်သည် Cuadrado ဖာနန်ဒက် ဟုသူကပြောသည်
Leo ကံဇာတာသို့မဟုတ်အကောင်းဆုံး Goo ၏ကမ္ဘာကြီးကို
David Cuadrado Fernandez အားပြန်ပြောပါ
လီယို Fortuny (သို့) ကမ္ဘာ၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များ
သငျသညျ The Room မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော Saga ထားခဲ့တယ်။ ဂရပ်ဖစ်အံ့မခန်း။ တစ်ခုလုံးကို Saga အကြံပြုလိုတယ်နှင့်အများကြီး
DRK | ကျပန်းလူ့ ဟုသူကပြောသည်
သူတို့က Free Fire ကိုမတပ်ဆင်ထားဘူး၊ ဒါက ၁၀ သန်းကျော်လောက်ရတယ်။ ဂိမ်းအားလုံးမကောင်းဘူး နှစ်ယောက်ကငါ့ကိုစိတ် ၀ င်စားခဲ့တယ်။ ဂျီသြမေတြီစစ်ပွဲ ၃ နဲ့တကယ့်ပြိုင်ပွဲ ၂ (ငါဟဟားဟားကစားပြီးပြီ)
DRK သို့ပြန်သွားပါ။ ကျပန်းလူ့
Q3 2017 ရလဒ်များ - Apple သည်ဆက်လက်တိုးတက်နေပြီး iPad သည်အံ့အားသင့်ဖွယ်ဖြစ်သည်
TestFlight သည် beta testers အရေအတွက်ကိုအသုံးပြုသူ ၁၀,၀၀၀ အထိတိုးချဲ့သည်